Original screen LCD for BlackBerry 9320 / 9220 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Original screen LCD for BlackBerry 9320 / 9220 Curve
smartphone ingxenye ukuthi ubonisa ulwazi. Lena spare okuyingxenye original, a screen enjalo efakwe emhlanganweni smartphone, high kanye nokwethembeka.
I LCD-44336-001 screen original ngoba BlackBerry Ijika (bheka uhlu ngezansi ukuhambisana) — smartphone ingxenye ukuthi ubonisa ulwazi. Washayela ukubonisa (ukubonisa), kusukela English "isibonisi".
Izici LCD-44336-001 * Screen:
Color (Inombolo color abangaphezu kwenkulungwane 65)
2.4 Ovundlile ye-intshi
I pixel kwabantu of 164 ye-intshi ngayinye
Inothi BlackBerry Ijika sikrini inguqulo noma uhlobo njengoba 001/111, 002/111 — bebonke, ayihambisani nomunye, nakuba, futhi babe nemingcele efanayo. Uma ufake inguqulo engahambisani ukubonisa ngemuva kokucima kudivayisi Siyobonisa isithombe white ngokuphelele, noma nemithende. Ngakho-ke, uma uhlela ukwenza esikhundleni kwesikrini akuyona enkonzweni yethu sesevisi ngaphambi uthenga ukuthola ukuthi yini version ukubonisa efakwe BlackBerry yakho .
Screen BlackBerry — esinye sezici ezibalulekile BlackBerry smartphone, futhi, ngeshwa, asikwazi lilungiswe uma kwenzeka iphutha. Uma wakho esikrinini BlackBerry uqhekeko, noma wagcwala liquid, noma nje "yenkinga" futhi imibukiso amakhaladi amabala noma umfanekiso elimhlophe, owukuphela kungenzeka ikhambi — ukuphindisela LCD screen.
Isikrini on BlackBerry 9310 / 9315/9320/9220 Ijika sivekelwe Ingxenye ekhethekile umzimba, "ingilazi esikrinini", okuyinto ongaqhubeki yimuphi ukuveza umsebenzi noma touch panel.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana lilungisa screen ungakwazi ukufunda ekhasini Ukubuyiselwa LCD Screen.
Original screen LCD for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Black, Uhlobo 002/111 9320LCD-002/111 (LCD-44336-002/111) ●
Original screen LCD for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Black, Uhlobo 001/111 9320LCD-001/111 (LCD-44336-001/111) ●
Black, Uhlobo 002/111 9320LCD-002/111 (LCD-44336-002/111)
Black, Uhlobo 001/111 9320LCD-001/111 (LCD-44336-001/111)